Tattoo chameleon, macne gaar ah | Tattoo
Tattoo Chameleon si aad u dareento mid gaar ah
Nat Cerezo | | Tattoos Xayawaan ah
Tattoo Chameleon, ka mid ah Tattoo jilifyada, waxay muujiyaan xayawaan aad u xiiso badan, qorraxda yar, noocyada qaar oo leh indho waaweyn oo bulxan, kuna sifoobay awood u lahaanshaha inay dhexgalaan deegaankeeda.
Maqaalkan ku saabsan tattoos chameleon, waxaan ku dhex gali doonnaa xiisaha xayawaankan xiisaha leh, Waan arki doonaa macnaha ay la xiriiraan waxaanan arki doonnaa xoogaa fikrado ah si tattoo-gaagu u noqdo mid gaar ah oo asal ah. Sii wad akhriska!
1 Xiisaha loo qabo rucleelaha
2 Macnaha Tattoo-gacmeedka
3 Sidee looga faa'iideystaa tattoo chameleon
4 Fikradaha Tattoo Chameleon
4.1 Tamar qabyaalad
4.2 Chameleon oo dharbaaxaya tatooyo
4.3 Tattoo chameleon macquul ah
4.4 Chameleons oo ay dhiirrigelisay sawirrada carruurta
4.5 Chameleon cagta
4.6 Soohdinta Chameleon
4.7 Chameleon gacanta
4.8 Tattoo Chameleon ee dabiiciga ah
4.9 Midab chameleon midab leh
5 Sawirrada Tattoos Chameleon
Xiisaha loo qabo rucleelaha
Boqortooyada xoolaha dhexdeeda iyo gaar ahaan xamaarato, Haddii uu jiro xayawaan ku sifoobay soo jiidashada dareenkeenna, waa canbarawlaha. In kasta oo qoyska xamaaratada ah ay ku dhex jiraan xayawaanno aad u qurux badan, haddana chameleon (in kasta oo aan dhab ahaan ka naqaanno wax kasta oo ku saabsan) ayaa sii wadaya in uu soo jiito feejignaanteena iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay ula qabsan karto deegaanka. Taasi waa sababta, astaamahan awgood, waxaan naftayda ku dhiirrigeliyey inaan sameeyo isku-dubarid yar oo ah tattoos chameleon.
Dabo dheer oo laalaaban, carrabka telescopic-ka ee u soo baxa si ay u soo qabtaan cayayaanka ama indhihiisa Kuwani waa qaar ka mid ah cunsurrada xayawaankan inna soo jiita marka aan ku aragno dokumenteriyada ka baxa telefishanka ama toos u nool, maadaama maalin kasta oo dhaafta dad badan lagu dhiirrigeliyo inay u yeeshaan xayawaan ahaan. Hada, maxaa ku horseedi kara qofka inuu sameeyo tattoo chameleon? Waxaan u sii soconaa faallaynta oo ku dhex milmaynaa astaamaha iyo macnaha lagu siiyo ruqsadaha dhaqammada kala duwan.
Tattoo chameleon maxay ka dhigan tahay? Sidaan horay u soo sheegnay, chameleon sida oo kale waa calaamad muujinaysa isbadal iyo waxqabad. Tan waxaa u sabab ah tayada iyo astaamaha xamaarato this si fiican u wada yaqaan. Gargaarka ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa badbaado, dulqaad, iyo ka fiirsasho ay ugu wacan tahay dabeecaddiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa.
Sidoo kale, dhaqammadii hore ee kala geddisanaa waxaa lagu faallooday in chameleon uu awood u leeyahay in uu arko labadaba tagtadii iyo mustaqbalka. Tan waxaa ugu wacan indhahooda oo awood u leh inay mid walba si madax-bannaan ugu dhaqaajiso jihooyin kala duwan.
Sidee looga faa'iideystaa tattoo chameleon
Si looga faa'iideysto tattoos chameleon, waxaa fiican inaad tixgeliso jirkaaga. Tusaale ahaan, tijaabooyinka badankood waxaa lagu kala saaraa:
Hayso iyaga indhaha oo bullanaya. Tattoo wuxuu ku siinayaa ciyaar mid kasta inuu ka eego dhinacooda (mid ka mid ah astaamaha xayawaankan).
Awooda midab beddel. Sida aad ku arki doontid fikradaha tattoo-ga ee aan mar dambe idin siin doonno, waa warqad aad u xiiso badan in la helo tattoo u gaar ah, tusaale ahaan, oo leh dhowr rucubyo midab leh oo midabbo kala duwan leh, oo keliya mid ka mid ah uu ku dhex milmayo dibadda ...
Una dabo aad u dheer. Tattoo-ga waxaad uga faa'iideysan kartaa adigoo ku duuduubaya geed, laftiisa ...
Una carrab dheer oo siman. Waxa ugu badan ee carrabka lagu garto waa inuu ku dhammaado qaab Ahraam iyo in cunnadu ku dhegto caaradda. Waxay ku habboon tahay tattoos halka aad rabto inaad ku muujiso xoogaa dhaqdhaqaaq ah.
La chameleon iska dhig Sidoo kale waa wax maskaxda lagu hayo marka lagu tusayo sawirka, tusaale ahaan, adoo istaagaya geed intaad is dabamarineyso, oo aad carrabka ku dhejineyso ...
Fikradaha Tattoo Chameleon
Kadib Waxaan ku siinaynaa dhawr fikradood oo kugu dhiirrigelinaya nashqaddaada soo socota iyo mooryaantiinna ayaa ugu qurux badan. Waxaa jira fursado badan!
Mid ka mid ah boqorrada 'chameleon tattoos' waa naqshadaha qabaa'ilka. Waana in xayawaanadan, oo ah kuwa caadiga ah ee meelaha qalaad iyo kuwa wanaagsan, ay aad ugu sugan yihiin dhaqamada qaarkood ee koonfurta. Tattoo ee qaabkan, waxaad ku qaadan kartaa fursad aad ku muujiso isbeddelka midabka ee xayawaankan oo kaliya leh qaababka hypnotic ee madow iyo caddaan, waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican.
Chameleon oo dharbaaxaya tatooyo
Waxqabadka inta badan kala sooca xayawaankan ayaa ah, iska cad, awoodeeda daboolida, taas oo sidaan horay u sheegnayba ay si dhaw ugu xidhantahay awoodaada la qabsiga. Sababtaas awgeed, iyo gaar ahaan haddii aad xiisaynayso gudbinta macnahan, naqshad ku ciyaaraysa midabada maqaarka chameleon si ay u muujiso inay isqarinayso ayaa aad u wanaagsan.
Tattoo chameleon macquul ah
Si loo muujiyo xayawaankan qaaliga ah ee quruxdiisa oo dhan, waxba ma ahan sida tattoo macquul ah. Waad tusi kartaa midab beddelaya ama xitaa ku raaci kartaa cunsur kale, tusaale ahaan, ubax. Haddii aad dooratid inaad ku sawirtid chameleon oo leh midabkiisa cagaaran ee cagaaran, dooro ubax, tusaale ahaan, casaan si aan cagaarku u jilicsanayn oo sidaas uga sii muuqan karin xitaa.
Chameleons oo ay dhiirrigelisay sawirrada carruurta
A chameleon sidoo kale waa musharax ku habboon in lagu muujiyo tattoo ku dhiirrigeliyay sawirrada carruurta. Astaamahiisa jir ahaaneed (indhaha, carrabka iyo dabada), oo la buunbuuniyey, waxay siinayaan ciyaar badan si ay u abuuraan dabeecad madadaalo ah oo umuuqata gabal aan caadi ahayn Ka dhig madow iyo caddaan taabasho caadi ah ama midab madadaalo badan.
Cagtu waa mid ka mid ah meelaha xiddigta leh si loogu sawiro astaamaha chameleon. Qaabka cagaha laftiisu wuu jecel yahay inuu tuso xayawaanku muuqaalka dabiicigaTusaale ahaan, horay u gurguurashada iyo carrabka oo ku dhegta Qaybaha ugu caansan waa qaab qabiil.
Hab wanaagsan oo lagu muujiyo tirada midabada badan ee kala sooca xayawaankan ayaa ah in la doorto in la sameeyo soohdinta chameleons, mid walbana leh midab ka duwan. Si aad u hesho taabasho xiiso leh, tus iyaga oo lugahoodu kala furan yihiin kuna xir silsilad ku xir gacmaha, anqawga ama gacanta.
Gacantu, sida cagaha oo kale, sidoo kale waa meel ku habboon in lagu matalo xayawaankan. Way ka khafiifsan tahay lugta, waxay matali kartaa cayayaanka adiga oo dabada ku duuban curcurkaaga, tusaale ahaan. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad aado naqshad yar oo aad dhigatid gacanta ama curcurka.
Tattoo Chameleon ee dabiiciga ah
In kasta oo aad matali kartid ruqsadaada jilicsan wax ka badan hal, haddana sidoo kale way fiicnaan doontaa haddii aad ku metesho deegaankeeda dabiiciga ah. Tusaale ahaan, waad ku wareejin kartaa laan, waxaad ku sawiri kartaa adigoo carrabka ku dhejinaya, ugaarsi ku haya bug ...
Midab chameleon midab leh
Tattoo-ka Chameleon iyo qorraxda kale ee qaab jilicsan u eg ayaa ah kuwa ugu badan, sidaa darteed waxaad u baahan kartaa inaad siiso taabasho asal ah adoo dooranaya midab qabiil. Xaaladdaas, halkii aad ka ahaan lahayd naqshad ku saleysan taxane khadadka hypnotic ee madow iyo caddaan ah, waxaad tusi kartaa shaxan qaabeysan oo chameleon ah (sawirka, tusaale ahaan, indhaha ayaa lagu muujiyey casaan, dabo duuban iyo fudeyd) ujeedooyinka oo buluug ah).
Tattoo-ka Chameleon waa mid aad u xiiso badan oo u muuqda mid qaabab kala duwan u muuqda, in kasta oo kuwa ugu caansan u muuqdaan kuwo qabyaaladaysan. Noo sheeg, ma leedahay wax sawir ah oo xayawaankan ah? Ka waran? Xageed ka heli lahayd Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto, tan awgeed, waa inaad noo soo qortaa faallo!
Sawirrada Tattoos Chameleon
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos Xayawaan ah » Tattoo Chameleon si aad u dareento mid gaar ah
Tattoo tattoo laanta saytuunka, calaamadda nabadda ama guusha
Tattoo Hawk, fiirsashada iyo diiradda